Laaluushka codbixiyeyaasha ee Kenya oo wiiqaya dimuquraadiyadda - Sabahionline.com
Laaluushka codbixiyeyaasha ee Kenya oo wiiqaya dimuquraadiyadda
Febraayo 27, 2013
Subax walba, Ernest Sikobe, oo ah 30 jir deggan xaafadda kayole ee waaxda doorashada Embakasi oo Nairobi ka tirsan, ayaa u wada koox saaxiibadiis ah in ay siyaartaan xafiisyada maxalliga ah ee dhowr ururada siyaasadda ka tirsan.
Codbixiye Kenyaan ah oo Kakuyuni kaga qayb galaya doorasho tijaabo ah oo waddanka oo dhan ka dhacday Febraayo 24-teedii. Codbixiyayaasha ayaa meelaha codka lagu bixiyo aadi doona Maarso 4-teeda. [Ivan Lieman/AFP]
Barlamaanka Kenya oo la horgeeynayo sharciga musuqmaasuqa olalaha doorashooyinka
Mudavadi oo aqbalay in laga badiyay ballanna ku qaaday in uu la shaqeeyn doono madaxweynaha xiga ee Kenya
"Waxaan kula kulanaa kooxo sugaya oo ku uruursan oo ilaashanaya [xafiisyada ololayaasha] si ay u helaan qaybtooda lacagta ay musharraxiintu u qaybinayaan codbixiyayaasha mustaqbalka," ayuu u sheegay Sabahi.
Maalin walba, wuxuu Sikobe sheegay in uu helo inta u dhaxaysa 50 shilin ($.60) iyo 200 oo shilin ($2.30) iyada oo ay ku xidhan tahay musharraxiinta kursiga ay u tartamayaan iyo haddii codbixiyuhu uu ballan qaadi karo in uu codbixiyayaal kale keeni karo si ay u taageeraan musharraxa. Musharraxa guddoomiye gobol wuxuu bixiyaa in ka badan musharraxa wakiil degmo, tusaale ahaan.
Rosemary Auma, oo 32 jir ah deggana xaafada Kawangware ee Nairobi, ayaa sheegtay inta badan dadka taga xafiisyada ururada siyaasadda si laaluush loo siiyo in ay yihiin kuwo shaqo la'aan ah.
"Waxaan lacag ka helay kooxaha ololaha ee saddex musharrax madaxwayne. Dabcan, si toos ah iyaga ugama helin, laakiin qofkii ay wakiisheen ee shaqada hayay," ayay u sheegtay Sabahi, iyada oo intaas ku dartay in xadka iyo qiimaha la bixiyo ay korodho marka ay maalinta doorashadu soo dhowaato.
Mukhtaar Cusmaan Daahir oo u ololeeya kooxda Bunge la Wananchi (Kulanka Dadwaynaha) ayaa sheegay in musharraxiintu ay ku xad-gudbayaan sharciyada doorashada taas oo xaaraantimaynaysa in lacag ama hadiyad lagu bixiyo in codad la helo.
"Waxaa jirtay sheegashooyin cad iyo xad gudub xilligii doorashooyinkii hore ee ururada siyaasadda ee la qabtay Janaayo 17-keedii iyo 18-keedii iyo xaalado kale oo laaluush ah oo ololayaasha hadda socda dhacaya, laakiin hal qofna dacwo laguma soo oogin," ayuu u sheegay Sabahi. Wuxuu sheegay in haddii sharciyada jira aan la fulinaynin, kuwa arrimahaas ku jira ay ku sii dhiiran doonaan in ay arintaas sii wadaan.
Cyprian Nyamwamu, oo ah madaxa fulinta ee Golaha Maamulka Shirwaynaha Qaranka, ayaa sheegay in laaluushka codbixiyeyaasha uu wiiqayo tayada musharraxiinta.
"Muxuu qofku u bixinayaa malaayin shilin si loo doorto haddii aysan wadin hunguri wayn iyo dhunsi lacagta dadwaynaha? Musharraxiinta laaluushka bixinaya si ay madax u noqdaan sida caadiga ah wakhtigooda waxay ku dhamaystaan in ay dhunsadaan lacagta horumarinta si ay u soo ceshadaan lacagtii uga baxaday xilligii ololaha iyo waliba u diyaar garawga doorashada ku xigta," ayuu u sheegay Sabahi.
Laban Osoro oo ah qareen xaruntiisu Nairobi tahay ayaa sheegay in sharcigii maalgalinta doorashooyinka ee baarlamaanka uu ku guul darraystay in uu oggolaado ka hor intii aan la kala dirin bishii Janaayo uu kaalmayn lahaa in uu arrintan cidhib tiro ama yareeyo laaluushka codbixiyeyaasha.
Sharciga ayaa ka codsan lahaa in qofku waxa uu leeyahay uu soo bandhigo, sharciyayn lahaa meelaha lacagtu ka timaado, xadna u yeeli lahaa lacagta musharraxiinta iyo ururadooda siyaasadeedba ay bixin karaan xiliga doorashooyinka. "Intii lacag lagu siin lahaa codbixiyaasha in ay yimaadaan isu soobaxyadooda ayna iyaga u codeeyaan, ayaa sharcigu wuxuu ku dhiiri galin lahaa siyaasad qadiyadaha ku salaysan," ayuu u sheegay Sabahi.
Guddoomiyaha Maamulka Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Soohdimaha James Oswago ayaa sheegay in guddigu hadda uu baadhayo ugu yaraan 10 kiis oo laaluush ah.
Tallaabo ayaa laga qaadi doonaa sida uu sharcigu dhigayo kuwii arrintaas lagu helo, tallaabooyinkaas oo ay ku jirto mamnuucitaan in ay doorashada u soo istaagaan iyo xabsi, ayuu u sheegay Sabahi.
"Waxaan samaynay qorshayaal aan dhaqan xumidan ku xakamaynayno sababta oo ah waxaan ognahay in laaluushka codbixiyeyaasha uu kor u kici doono marka ay soo dhowaato maalinta doorashada," ayuu yidhi. "Kooxaha inta badan ku soo xoomaya xarumaha doorashooyinka looma oggolaan doono, booliiskana amar adag ayaa lagu siiyay in ay tallaabo ka qaadaan qofkii arrintaas ku xad gudba."
March 7, 2013 @ 03:29:48PM
Kenya qof kasta oo inaga mid ah way ka wayntahay, markaa fadlan is dajiya oo suga natiijooyinka kama dambaysta ah. Marlabaadna waxaan leeyahay ha la taageero qofkii guulaysta. Nabadeey, ilaahay ha barakeeyo Kenya.